Izitayile ezine zezitulo zomthi oqinileyo zibonwa njengeyona fanitshala intle kumzi-mveliso we-Alice wehlabathi
Abavelisi ababonelela ngeenkonzo ze-OEM zeeleyibhile ezikumgangatho ophezulu
Ileyibhile yebhotile yentsimbi
Iibheji zeAluminiyam yeeLebhile
Ileyibhile yeNsimbi eStainless
I-armchair sisitulo esineempawu ezizodwa zesizwe saseTshayina, kwaye ikwabonwa njengeyona fanitshala intle kwihlabathi.
Ukukhuthaza isimbo esilula, akukho mhlobiso, nikela ingqalelo kubuhle bezinto eziphathekayo, ukusetyenziswa okwaneleyo komthi ngokwawo kunye nokuthungwa ngaphandle kokugquma, kunye nokusetyenziswa kobuhle bezinto ezikhethekileyo kwi-texture yempahla ukubonisa umthi wefenitshala ngokwayo kunye nendalo kunye nokulula. iimpawu.
Nika ingqalelo kwiinguqu zohlobo lomgca, okubangelwa ukungafani phakathi kwemigca echanekileyo kunye neengqungquthela, ukuchasana kwesikwere kunye nokujikelezayo, ukuchasana okuthe tye kunye nokuthe tye, kunye nobuhle obuqinileyo befom. Ulungile ekuthandeni kwaye unobuhle, kwaye uphumelela ngokungqongqo okucokisekileyo.
Ukucula yi-icing kwikhekhe, echanekileyo kwaye echanekileyo, ukubala ngokucophelela, kunye nengqalelo enkulu kubuhle besakhiwo. Isakhiwo se-tenon kunye ne-tenon sisetyenzisiweyo, kwaye kukho ezininzi iintlobo ze-tenon kwaye zilungelelanise nezakhiwo ezahlukahlukeneyo, ezingahambelani kuphela neemfuno zokusebenza kunye nesakhiwo somatshini, kodwa zenza ukuba zizinzile, zihle kwaye zihlale zihleli.
Nikelani ingqalelo kubuhle bobugcisa, ukuma okuhle, inkangeleko esulungekileyo, kunye nokungonwabi kwaye kunzima. Nika ingqalelo kwisisombululo somphezulu kwaye usebenzise ukwakhiwa kwendabuko yaseTshayina yesakhiwo sesakhelo. Imilo yangaphandle yonyawo lwesikwere ifana nentsika, kwaye i-crosspiece ifana nomqadi. Utshintsho lufanelekile, olukhokelela kwiimpawu ezijoliswe kwisakhelo kunye nenkangeleko, eyenza i-armchair ye-Ming ibe nayo Imbonakalo ilula kwaye iyatsala, inamandla kwaye yomelele, ithambile kwaye intle kwi-worksshipship.
Ngayo bhengeza: Lo mxholo ungasentla uvela kwi-Intanethi, kwaye umxholo wenzelwe ireferensi yakho kuphela. Ukuba wophula amalungelo akho, nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuyicima kwangoko.
UAlice lishishini elivelisa iipleyiti zamagama. Ukusukela ekusekweni kwayo ngo-1998, izibophelele ekuveliseni zonke iintlobo zamagama achanekileyo. Ngomgangatho obalaseleyo, inkonzo enenkathalo, kunye nemfezeko elungileyo, ibonelela abathengi ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo zemiqondiso ezilungiselelweyo.
YANGAPHAMBILI Ziziphi iingxaki ekufuneka ziqwalaselwe xa uprinta iilebhile zokuzincamathelisa-i-Alice factory
Iingcebiso zokugcina iitafile zokhuni oluqinileyo kunye nezitulo-i-Alice factory OKULANDELAYO